Okwu keyboard Bluetooth maka Samsung galaxy tab A7 10.4 SM T500 T505 T507 2020
IWUPUTA zuru oke Mee ka ihu na azụ nke mbadamba nkume gị ghara ịdị na-adị scuffs, ọkọ na ịwụfu. Azụ azụ na-ejide mbadamba nkume gị na obere obere na nke dị fechaa nke na-echedo nkuku. UGBU A, tebụl gị nwere ike ime ihe dị ka laptọọpụ, nwee ọ ofụ oge nke izu ike, nke na-agbanwe agbanwe na-enye ekele maka igodo sissor na ibe dị mma, yabụ aka gị agaghị ada mba. Isi njem nke 2 mm na-enye ezigbo omimi maka ọsọ na nkasi obi. Ydị na osisi gị ma ọ bụ gị aka ma ọ bụ ụlọ ahịa ụlọ ahịa Nanị imeghe ikpe a ...
Keyboard ikpe maka Samsung galaxy tab A7 lite 8.7 inch 2021 Bluetooth keyboard Funda
UGBU A tebụl gị dị ka a laptọọ Achọpụta ihe na-enye obi ụtọ maka igodo sissor na ibe dị mma, yabụ aka gị agaghị ada mbà. Isi njem bụ 2 mm, nke na-enye omimi zuru oke maka ọsọ na nkasi obi. Guzosie ike ma rụọ ọrụ ngwa ngwa Site na mgbochi awụlị, a na-ekpochi mbadamba nkume gị na ọnọdụ ederede zuru oke ma na-anọgidesi ike ọbụlagodi mgbe ị na-ede ihe na-enweghị atụ dịka apata ụkwụ gị. Yabụ ị nwere ike mepee ikpe ahụ, ma bido ọrụ gị ozugbo. Emeputa Design Wuru- na ike ndọta, nke ...
Ikwupụta keyboard ahụ maka iPad 10.2 2020 2019 maka ipad 8 ipad 7
PENCIL Holding Perfect COMBINATION Ezubere iji Pencil rụọ ọrụ, yabụ ị nwere ike iji aka dee ihe edetu, see eserese, ma ọ bụ kaa akara akwụkwọ na iPad. Na mgbakwunye, onye na-arụ ọrụ n’ime ya na-echekwa mkpịsị gị ka ọ dịrị mgbe ọ bụla ịchọrọ ya. AKW PRKWỌ KWES ANDR AND NA OFLỌ NKE TRACKPAD Na-arụ ọrụ na nkedo nkedo usoro na ngwa dịka ndetu, ibe, tebụl nọmba na isi okwu. Ga-enwe ike igosipụta mpempe akwụkwọ na-ebugharị, depụta okwu, ma dezie ozi ịntanetị na ịdị nro. Jiri ngwa ngwa otutu gosiputa oru gi.
Igwe okwu magnet na keyboard maka ikuku ipad 4 10.9 inch 2020 Maka iPad ikuku 4 10.9inch 2020
IWU MGBE AHAG Mpempe akwụkwọ keyboard a jikọtara shei magneitc shellproof na nkenke trackpad na keyboard zuru oke maka iPad gị. Shockproof shei na-n'ụzọ zuru okè magetical adsorpted na cover, awade abụọ nchedo. Nkwado mmegharị aka zuru ezu na-agbanwe iPad gị ka ọ bụrụ igwe nrụpụta maka ịrụ ọrụ na mpempe akwụkwọ na akwụkwọ, ngwa ọrụ mmụta siri ike maka klaasị dịpụrụ adịpụ, na ndị ọzọ — ohere dịnụ enweghị njedebe. MAGNETIC Wepụ SHOCKPROOF SHELL Na-ewu na-ike ma ...
Gburugburu igodo Bluetooth keyboard maka ipad maka Samsung Lenovo Huawei tablet with touchpad
Typedị kiiboodu ọhụrụ maka gị Igodo nke 78units gburugburu, metụ ezigbo mmetụta na nkasi obi. Enwe nkasi obi na ịdị mma nke desktọọpụ dee na ekwentị gị na mbadamba. Ultra-Portable Ọ bụ àjà ihe ọ ultraụ -ụ-obere keyboard. Ọdịdị ya dị gịrịgịrị na nke dị nro na-enye gị ohere iwere gị ebe ọ bụla, n'oge ọ bụla. Mfe na-ebu gburugburu ụlọ gị maka ịde ihe mara nke ọma n'ime ụlọ ọ bụla, ma wegara ọfịs gị, kafe na ụgbọ elu, dị na-ebu n'etiti ibe akwụkwọ gị, n'ime akpa aka gị. Mfe Bluetooth Mmakọ ...
Ileba maka AKW NoKWỌ Nova3 agba Nova 3 Nova 2 7.8 inch na aka eriri pensụl njide
Ọkpụkpọ akpụkpọ anụ na-arụ ọrụ Nke a na-agwakọta eriri aka, ihe njide pensụl na nkwụsị ụkwụ. Ọ na-ejide onye na-ege gị ntị kwụrụ ọtọ. Hapụ aka gị mgbe ị na-agụ ihe, yana ị drinkingụ kọfị. Onye pensụl pensụl na-ejide mkpịsị odee gị mgbe ị naghị eji ya. Ntucha aka na-eji eriri aka / aka aka, ọ na-enye gị ohere ijide onye na-agụ ya site na otu hand.The na-agbanwe band dị mma ma dabara maka gị na aka ndị ọzọ. Kwụsị kwụrụ ụkwụ Kwụpụ aka gị .Ọ bụrụ na ị kwụpụ, gị onye na-agụ ihe kwụrụ ọtọ ...